BaHuThuTaGabar - Page 289 of 374 - Welcome to Bahuthutagabar
ခြေဗလာလမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်း ကျိုး လေး များ ကျောက်စရစ် ခဲလုံးလေးတွေပေါ် ဖိနပ်မပါဘဲလမ်းလျှောက် နေတာကိုမြင်ဖူးကြမှာပါ။ မြေပြန့်ပေါ်မလျှောက်ဘဲ ဘာ့ကြောင့် တကူးတက ခဲလုံး ပေါ် လမ်းလျှောက်ကြရတာလဲ? ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ဘာ့ကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲ လမ်းလျှောက်ကြရတာလဲ? (၁) သွေးကျစေပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ သက်ကြီး ရွယ်အိုများကို […]
ပိုချစ်ရတဲ့သူ ကိုယ်သာဖြစ်ပါစေ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲနားလည်ပေးတဲ့သူ၊ ဆိုးတူကောင်းဘက် ရှိနေခဲ့သူ၊ ဆင်းရဲနှိမ့်ချမှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ သစ္စာရှိရှိနဲ့ ဘေးမှာ နေပေးခဲ့သူတွေကို စိတ်ဒုက္ခမပေးပါနဲ့။ ကိုယ်စိတ်ညစ်ရတိုင်း ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲလို့ အဖြေရှာမိတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အနီးကပ်ဆုံးသူတွေ၊ ကိုယ်နားလည် လက်တွဲခဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ အမြဲရှိနေခဲ့သူ တွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ စိတ်ဒုက္ခက ပိုများပါတယ်။ […]
မဲညစ်နေတဲ့ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
မဲညစ်နေတဲ့ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ ပျိုမေတို့ အနေနဲ့အတိုတွေ၊ လက်ပြတ်တွေ ဝတ်တဲ့အခါ ချိုင်းသားတွေ၊ ပေါင်ခြံတွေ မဲနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့ အပြင် လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပြီး အိမ်မှာတင် ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်း […]
ဇနီးကောင်းတို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
မိန်းမနဲ့ယောက်ျားဆိုတာက လိင်သဘာဝအရရော ထမ်းဆောင်ရမယ့်အိမ်ထောင်ရေးတာဝန်အရ ပါ ကွာခြားလွန်းပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အချိန်ဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှပဆုံး နဲ့ အတောက်ပဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတတ်ပြီး ယောက်ျားအဖို့ အောင်မြင်မူရခါစ (သို့) ဘ၀တက်လမ်းတက်ခါစပဲ ရှိနေတတ်သေးတယ်။ သဘာဝအရ ကလေး တစ်ယောက်နှစ်ယောက်မွေးပြီးလို့ မိန်းမများဟာ မျက်နာအလှရော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပါ အကျဘက်ကို ဦးတည်နေတဲ့အချိန်မှာ ယောက်ျားများဟာ […]
“ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်မယ်ဆိုရင် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ”
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆား ထည့်လျှော်မယ်ဆိုရင် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ တစ်ခါတလေ ကိုယ်ထင်မှတ် မထားတာလေးတွေက ကိုယ့်အတွက် အများကြီး အကျိုးပြုတတ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း သင် လုံးဝ ထင်မှတ်မထားဘဲ အမြဲသုံးနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကို အိမ်သုံး ဆားနဲ့ သာ တွဲသုံးလိုက်ရင် ဆံပင်အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတစ်မျိုး […]
တိုက်ခိုက်သူကို ရင်ဆိုင်နည်း – ဆရာတော် အရှင်သုစိတ္တ (မော်ကျွန်း)
တိုက်ခိုက်သူကို ရင်ဆိုင်နည်း – ဆရာတော် အရှင်သုစိတ္တ (မော်ကျွန်း) တိုက်ခိုက်သူ တိုက်ခိုက်သူကို ရင်ဆိုင်နည်း ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်ရင် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးပြန်မတုန့်ပြန်ပါနဲ့နော်။ မှားသွားလိမ့်မယ်။ အဲဒါသူတို့ရဲ့အကွက်ထဲ ဝင်သွားတာ။ ကိုယ်တုန်လှုပ်ပြရင် သူတို့က ဝမ်းသာနေရော။ အတိုက်အခိုက်များနေရင် တရားမထိုင်တတ်ရင် ဂုဏ်တော်များများပွားပါ။ သူတို့ကိုလည်း မရင့်ကျက်သူများအဖြစ် သနားပေးပါ။ စကားထိပ်တိုက်မပြောဖြစ်အောင်ရှောင်ပါ။ ကိုယ့်မျက်နှာမှာ […]
အသက်ကြီးသူများအတွက် ” သဘာဝ​ဆေး “
အသက်ကြီးသူများအတွက် ” သဘာဝ​ဆေး ” မြန်​မာအိမ်​တိုင်းမှာ သင်္ကြန်​​ရောက်​ရင်​ မြေအိုး​သေး​သေး​လေး​တွေ ဝယ်​ကြတယ်​​ ကျမ ကအဲဒီ​ မြေအိုး ​သေး​သေး​လေးထဲက်ို ရေ မပြည့်​တပြည့်​ထည့်​ပြီး မကျည်းသီး လက်​တဆုပ်​ခန့်​ ထန်းလျက်​ အလုံး​သေး​သေး​လေး​တွေ ၁၅လုံးခန့်​ ဆား ဇွန်း​သေး​သေး တစ်​ဇွန်းခန့်​ အဲဒီ ၃မျိုးကို ဒီအတိုင်းထည့်​ထားလိုက်​တယ်​ […]
ကိုယ့်ချစ်သူကို ပက်ပက်စက်စက် အနိုင်ယူနည်း…
1) သူ့ကို ဘယ်တော့မှ ဦးစား မပေးပါနဲ့ ဥပမာ… မုန့်​ဆိုင်​ထိုင် စားပြီးတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကိုယ်က အရင်​ဦးဆုံး ပိုက်​ဆံ ထုတ်​ပြီးသာ ရှင်းပြစ်လိုက်.. 2) စကားကို တစ်ခွန်းထက် ပိုပြီး မပြောခိုင်နဲ့ ဥပမာ- ” ကိုကို … ဒါလေး ဝယ်ပေးနော် […]
​ပြောင်​​မြောက်​​​သော သူရသတ္တိဖြင့်​ တာဝန်​ကို ရဲဝံ့စွန်းစားစွာ ထမ်း​ဆောင်​ခဲ့​သော​ကြောင့်​ သူရဘွဲ့ရရှိပြီး နိုင်ငံတာဝန်ကို ကျရာအခန်း ကဏ္ဍကနေ မငြီးမငြူတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​​နေ​သော အရာရှိကောင်းတစ်​ဦး ဖြစ်​ပါသည်​။ ဗိုလ်​သင်​တန်းတက်​​ရောက်​အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ခလရ(၄)4Gurkha Rifle မှာ ဒုတိယဗိုလ်​ အဆင့်​နဲ့ စတင်​ပြီး တာဝန်​​တွေ ထမ်း​ဆောင်​ခဲ့ပါသည်​။ အရပ်သုံးစကားနဲ့ပြောရင် ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း။ […]
ကြိုးစားပါလျှက် မအောင်မြင်သည့်အခါ ဒီယင်ကောင်ကို သတိရပါ ဆရာဖေမြင့်
လမ်းမသိသောယင်ကောင် မီလ်ခရော့(ဖ)စားသောက်ဆိုင်၏ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်ထိုင်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်က တိုရွန်တိုမြို့ပြင်ဘက် တစ်နာရီခရီးလောက်မှာရှိနေသည်။ ထင်းရှူးပင်များကြားမှာ ပုန်းလျှိုးတည်ရှိသည့်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာကလေး။ သို့သော် ကျွန်တော်နှင့် သုံးလေးပေအကွာလောက်မှာ သေရေးရှင်ရေးတမျှ အမောတကောကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေသံတစ်ခု ကျွန်တော်ကြားနေရသည်။ ယင်ကောင်လေးတစ်ကောင် ပြတင်းမှန်ချပ်ကိုဖောက်ထွက်နိုင်ရန် အသည်းအသန်ကြိုးစားနေခြင်းပင်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ ကြွင်းကျန်သမျှ စွမ်းအားကို ဖြစ်နိုင်စရာမရှိသည့် သည်အရေးကိစ္စကြီးအတွက် သူဖြုန်းတီးနေသည်။ […]
« 1 … 288 289 290 … 374 »